IHodges Connect Isiza Ukugcwalisa Izikhala Zamakhono Abasebenzi »IHodges University
IHodges University Isiza Ukugcwalisa Izikhala Zabasebenzi ngeHodges Connect
IHodges University iphendula isimemo sokuthuthukiswa kwamakhono abasebenzi ngohlelo lwethu lokuqeqeshelwa umsebenzi, iProfessional Education and Training (PET), olubizwa ngeHodges Connect.
IHodges Connect imayelana nokunikeza abasebenzi bethu umkhawulo wokuncintisana futhi yakhelwe ukulungiselela abasebenzi abanamakhono adingeka kumqashi adingekayo ukuze baphumelele. Ama-Workshops namakilasi ngaphakathi kwamapulatifomu weHodges Connect angahle enzelwe noma yimuphi umkhakha futhi angatholwa ngabantu noma amaqembu ezinkampani.
Ukuthuthukiswa Kwamakhono Abasebenzi kuhlanganisa:
Ukuqeqeshwa Komphathi Wokuqala yakhelwe ukuhweba nokwakha, ukukhanda, abafaki kanye nabalungisi, ukuthengisa okungathengisi, ukusekelwa kwehhovisi nezokuphatha, insizakalo yomuntu siqu, ukuthengisa okuthengiswayo, ukugcinwa kwezindlu kanye nokugcinwa kwezindlu, ukulungiswa kwensimu kanye nensimu, kanye nokuhamba kanye nokuhambisa izinto zomshini kanye nabaqhubi bezimoto.
Ukusekelwa Kwempilo Eyisisekelo, Isivuseleli Sokusekelwa Kwempilo Eyisisekelo kanye Nosizo Lokuqala Lwenhliziyo I-CPR AED.
Izinhlelo Zezobuchwepheshe ziyeza maduze kufaka phakathi i-AutoCAD ne-ADOBE Software Applications.
Ukuze uthole okwengeziwe ngeHodges Connect, funda yonke indatshana yokuhlela ku- I-Naples Daily News.
IHodges University, isikhungo esivunyelwe ngokomthetho, esizimele esingenzi nzuzo esasungulwa e1990, silungiselela abafundi ukuthi basebenzise imfundo ephakeme emisebenzini yabo yomuntu siqu, yobungcweti neyomphakathi. Njengoba kunabafundi abangaphezu kuka-10,000 93 abanamaphesenti angama-XNUMX empumelelo eqhubekayo emisebenzini, uHodges uyaziwa ngokuthuthukisa izinhlelo ezenzelwe ngokukhethekile futhi zilethwe ukusebenzela abafundi abahlukahlukene. Ngamakhampasi aseNaples naseFort Myers, eFlorida, iHodges inikeza amakilasi aguqukayo osuku, kusihlwa, naku-inthanethi afundiswa ubuhlakani obusezingeni lomhlaba lama-undergraduate kanye neziqu. IHodges ibizwa nangokuthi yi-Hispanic Serving Institution, futhi iyilungu le-Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU). Imininingwane engaphezulu ngeHodges University iyatholakala ku Hodges.edu.
Tags: IHodges Connect, I-PET, Ukuthuthukiswa Kwamakhono Abasebenzi